बिष्णु मझीले चरी जे,लैमा गीत गाएपछी उनको वास्तविक जिवन बारेमा खुल्यो ठुलो रहस्य, किन सधै गुम,नाम छिन बिष्णु ? भिडियो सहित - dautarimedia.com
बिष्णु मझीले चरी जे,लैमा गीत गाएपछी उनको वास्तविक जिवन बारेमा खुल्यो ठुलो रहस्य, किन सधै गुम,नाम छिन बिष्णु ? भिडियो सहित
विष्णु माझीको विवाह गायक तथा संगीतकार सुन्दरमणि अधिकारीसँग २०६८ साल मंसिर २९ गते पोखराको राम मन्दिरमा भएको थियो । विष्णु माझी दुई जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा समेत हुन् ।
विष्णु माझी नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रकि सबैभन्दा महंगो गायिका हुन् तर उनी बाहिरी कुराहरूबाट गुमनाम छिन् । उनले एउटा लोकगीतमा स्वर दिएबापत जति पारिश्रमिक लिन्छिन् त्यो अहिलेसम्म कसैले लिएका छैनन् । विष्णु माझीले एउटा गीतका लागि तीन लाख सम्म लिएको सुनिन्छ । बिष्णु माझी को बारेमा पुन्य गौतमले केहि कुरा खुलाएका छन हेरौ भिडियोमा
Previous: गायिका रानी शाक्यको “बुझेनन कसैले” सार्बजनिक विजय र समिक्षाको “बुझेनन कसैले” सार्वजनिक देव धिमालको निर्देशनमा “बुझेनन कसैले” सार्वजनिक
Next: माधव नेपाल सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग पु